Minisitra Bartlett: Manamafy ny fahaizan'ny COVID-19 i Jamaika hamaly ny fangatahana mitombo
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Minisitra Bartlett: Manamafy ny fahaizan'ny COVID-19 i Jamaika hamaly ny fangatahana mitombo
Ny mpitsidika rehetra izay tonga ao Jamaika dia afaka mahazo ny lalam-panadinana ekena mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny takian'ny fireneny avy isaky ny hiditra indray.
Ny minisitry ny fizahantany, Edmund Bartlett dia nanambara fa nanamafy ny fotodrafitrasa fanandramana COVID-19 i Jamaika hamaly ny fitomboan'ny fangatahana fanandramana toy izany, tarihin'ny fitakiana fitsangatsanganana vaovao amin'ny tsenan'ny fizahantany lehibe.
“Vonona be i Jamaika izao. Izahay dia namolavola fotodrafitrasa hiantohana ny habetsaky ny maso fitiliana sy / na ahafahana manao ny fomba fitiliana virus izay eken'ny tompon'andraikitra voakasik'izany. Noho izany, ny mpitsidika rehetra tonga ao Jamaika dia afaka miditra amin'ny fandaminana andrana ankatoavina hahafahan'izy ireo manatanteraka ny fepetra takian'ny fireneny avy amin'ny fidirana indray, "hoy ny minisitra Bartlett.
Ity dia manaraka ny baiko nataon'ny US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) farany teo, izay mitaky porofon'ny valin'ny fitsapana COVID-19 ratsy ho an'ireo mpandeha fiaramanidina mandeha any Etazonia. Ny fepetra mitovy amin'izany dia natolotry ny governemanta Canada sy UK teo aloha, izay mitaky ny olona rehetra manidina amin'ireo firenena ireo hanolotra valim-panadinana ratsy hanamorana ny fidirana na hisorohana ny quarantine.
Nasongadin'ny minisitra fa ny fanatsarana ny rafitry ny fanandramana dia notarihan'ny vondron'asa manokana namboariny vao haingana mba hitarika ny ezaka hanamafisana ny fahaizan'ny COVID-19 fitsapana an'i Jamaika. Namorona rafitra koa ity vondrona ity izay hanamora ny fizotran'ny mpitsidika.
“Nahavita asa betsaka ny vondron-kery. Anisan'izany ny fandraisana fepetra hanombanana sy hamaritana ny fahaiza-manao hamaly ny filàna fitsapana ireo mpitsidika rehetra hiverina any amin'ny fireneny ary faly aho milaza fa vita io asa io. Afaka manao tatitra tsara izahay fa ny laboratoara dia nahazo fankatoavana sy loharanom-pahalalana avokoa, ”hoy ny minisitra.
“Nametraka fandaminana roa ihany koa izahay. Eo amin'ny toerana akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena ao Montego Bay sy Kingston no misy azy ireo, ”hoy ny minisitra Bartlett.
Eo ihany koa ny toerana hanaovana andrana amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe rehetra ao amin'ny firenena ary napetraka ny fikarakarana ny fitaterana hanamorana ny fivezivezin'ny mpitsidika ny foibem-panandramana akaiky indrindra, raha tsy misy trano. Ny mpitsidika dia hanana safidy ihany koa handoa ny fanadinana alohan'ny hahatongavan'izy ireo any amin'ireo fotodrafitrasa.
Nizara ihany koa ny minisitra fa misy politika iray mivoatra ho an'ireo mpitsidika izay manaporofo tsara mialoha ny fiaingany amin'ilay nosy. “Ho an'ireo mpitsidika izay mizaha toetra tsara dia manana programa fikarakarana tsara izahay izay voarindra. Ireo trano fandraisam-bahiny no ho mpamaly voalohany amin'ny famelana ireo mpitsidika hipetraka amin'ny fananana amin'ny faritra voatondro mandritra ny vanim-potoana, indrindra raha tsy simptomatika izy ireo, mba hahafeno ny fepetra takiana ahafahan'izy ireo mody any an-trano, ”hoy izy.
Nanazava ihany koa ny minisitra fa mavesatra ny fepetra takiana amin'ny dia. “Tena sarotra ireo fepetra vaovao ireo ary efa voasakana izahay amin'ny alàlan'ny protokol efa misy. Ireo vaovao ihany dia manampy an'io enta-mavesatra io. Izy io dia mampihetsika ny vidiny ary mampihena ny habetsaky ny volany, ary hisy vokany eo amin'ny fivelaran'ny orinasany sasany. Na izany aza, ny tsy misy fiantraikany amin'izany dia ny kalitao sy ny haavon'ny traikefa avo izay natolotr'i Jamaika. Mbola eto amintsika no toerana tsara indrindra hitsidihana ”, hoy ny minisitra.
Ny vondron-kery manokana dia tarihin'ny minisitra Bartlett ary ahitàna ny filohan'ny Fikambanan'ny Hotely sy ny mpizahatany (JHTA) ao Jamaika, Clifton Reader; Filoha lefitra voalohan'ny Fikambanan'ny Hotely sy fizahan-tany Karaiba (CHTA) ary ny filohan'ny JHTA teo aloha, Nicola Madden-Greig; Filohan'ny orinasan'ny fampandrosoana ny fizahantany (TPDCo), Ian Dear; Filohan'ny lefitry ny vondrona sandaly ary filohan'ny filankevitry ny tambajotran-tserasera fizahan-tany, Adam Stewart; Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Chukka Caribbean Adventures ary ny talen'ny ekipa fitantanana lalantsara miovaova COVID-19, John Byles; ary mpanolotsaina zokiolona sy stratejista ao amin'ny Ministeran'ny fizahantany, Delano Seiveright.
Miasa miaraka amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny Fahasalamana ary ireo mpiaramiasa fizahan-tany ity vondron'asa ity, na eo amin'ny sehatra miankina na tsy miankina.
Entanina ireo mpitsidika hijery ny tranonkalan'ny Birao Mpizahatany ao Jamaika (www.visitjamaica.com) ary koa ny tranokalan'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fahasalamana (www.moh.gov.jm) ho an'ny fanavaozana ny fandaharam-pitsapana sy ny toeram-pitsapana nankatoavina.
Hotely Hawaii: ny fidiram-bola tamin'ny Desambra, ny tahan'ny isan'andro, ary ny fibodoana dia nihena be
Coronavirus any Afrika dia afaka mamadika 30 taona ny tombom-barotra amin'ny fiarovana ny Bibidia